विप्लवले सोधे – जनमुक्ती सेनाका क्यान्टोन्मेन्टको १९ अर्ब खोई ? – Yuwa Aawaj
विप्लवले सोधे – जनमुक्ती सेनाका क्यान्टोन्मेन्टको १९ अर्ब खोई ?
फागुण २५, २०७७ मंगलबार 196
काठमाडौं;: सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले तत्कालीन माओवादी ने’तृत्वले लडाकु शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) व्यवस्थापनका
नाममा अर्बाैं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ने’तृत्वलाई लक्षित गर्दै क्यान्टो’न्मेन्टमा भएको आर्थिक अनि’यमितताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिबन्ध फुकुवापछि गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले जनमुक्ति सेनाको पैसामाथि भ्र’ष्टाचार भएको विषय सार्वजनिक भएको र सो विषय आफूले त्यतिखेरै पार्टीमा ग’म्भीर रूपमा उठाएको भए पनि बेवास्ता गरिएको बताए ।
भ्रष्टाचारको विषय सार्वजनिक भए पनि ठोस परिणाम नआएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘भ्रष्टाचार कसले गरेको हो ठोस हुनुपर्दैन । एउटाले अर्कोलाई दो’ष दिएको छ,’ उनले भने । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
Prevब्रेकिङ न्युज : एमाले र माओवादी अलग-अलग भएर जाने निर्णय ।
Nextहिजाे खाते भनेर अप’मान गर्ने-हरू आज स्याबास भन्दै धाप मार्छन !